चक्रवर्ती, क्याम्पस कानुनका विद्यार्थीको रोजाइमा - Balsirjana
कानुन अध्ययनमा विद्यार्थीहरूको रूची बढ्दै गएपछि धेरै कलेजले कानुनको अध्यापन गराउन थालेका छन् । कानुनको अध्यापन गराउने एउटा कलेजको नाम हो चक्रवती हबी एजुकेशन एकेडेमी । सन २०१० मा स्थापना भएको यो कले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएको छ । कानुनमा स्नातक र स्नाकोत्तरमा अध्यापन हुँने कलेजका क्याम्पस प्रमुख र सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुनुहुन्छ देवेन्द्रबहादुर भण्डारी ।
भण्डारी नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त निरीक्षक हुनुहुन्थ्यो । भण्डारीले अमेरिकाको हार्डवर्ड विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । त्यहाँबाट फर्केपछि भण्डारीले चक्रवती हबी एजुकेशन एकेडेमी खोलेका हुन् । कलेज काठमाडौंको मुटु मानिने विजुलीबजारमा अवस्थित छ .
कानुनमा दक्ष व्यक्तिको माग दिनप्रतिदिन बढ्दै गएपनि दक्ष मानिस भेटाउन छ । नेपालमा कानुन पढेकाहरू विदेशमा पुगेर कान गर्न नसक्नुको कारण कोर्ष डिजाइन गर्दा विश्वविद्यालयहरूले ध्यान पु¥याउन नसक्नु रहेको भण्डारीको तर्क छ । ‘कानुनमा अध्ययन गर्न विदेशमा सिलसिलेवार कोर्ष हुन्छ । नेपालमा त्यस अनुरुपको छैन । विश्वविद्यालयले कोर्ष डिजाइन गर्दा ध्यान नदिएको देखिन्छ,’ भण्डारी भन्नुहुन्छ।
अरू विषयमा स्नातक वा मास्टर्स गरेर बेरोजगार भएर बसेको जनशक्ति कानुन अध्ययन गरेपछि वैकल्पिक पेसा अपनाउन सक्छ । सरकारी कर्मचारीलाई कानुनको ज्ञान अत्यावश्यक छ । ७५३ स्थानीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार र केन्द्रमा पनि कानुन जानेका व्यक्तिको आवश्यकता हुने भएकाले माग बढिरहेको छ ।
हाल स्नातकमा ५०० विद्यार्थी र स्नातकोत्तरमा २०० विद्यार्थी अध्ययनरत छन छन् ।
त्यस्तै विषयविज्ञ प्राध्यापकहरु देवेन्द्रबहादुर भण्डारी, प्रा. दिनदर्याल रेगमी दिपक वाल्मीकी र डा. गजेन्द्र अर्याललगाएतका नाम चलेका प्राध्यापकहरुद्घारा अध्यापन भैरहेको छ ।
स्नातकोत्तरमा यही शैक्षिक सत्रबाट अग्रेजी विषयमा पढाइ सुरु गरेका छन् ।
पछिल्लाे - राष्ट्रपतिबाट भदौ २३ मा संसद अधिवेशन आह्वान
अघिल्लाे - विघटनको बाटोमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण